New Snapchat yekuvandudza: Yese yakakura chiitiko chakaziviswa pamusangano weSnap
Snap yakaputira iyo Partner Summit kiyi kiyi, maikomo yakazivisa huwandu hutsva hwe Snapchat pamwe nekuvandudza kwepuratifomu, zvibvumirano zvekudyidzana, uye mitsva yekubatanidza. Zvese kubva kuArm kusvika pakutsigirwa zvakabatwa panguva yechiitiko ichi. Heano chiitiko chezvese zviziviso izvo zvine basa, kusanganisira kutsanangurwa kwechinhu chiri chose chitsva chiri kuuya paiyo Snapchat mobile app.
Ndeipi Snap Partner Summit?
Snap yakatenderedza 2020 Partner Musangano on 11 June at 9:45 am PT. Akaurayiwa kubva kukambani yose airatidzira zvigadzirwa zvitsva uye akazivisa hushamwari hutsva pachiitiko chega-chete. Musangano wechipiri-pagore wakagadziridzwa kutanga kwaKubvumbi asi wakamisikidzwa neCOVID-19 denda. Snap akati yakadzika-dive vhidhiyo yekuputsa mavhidhiyo ichave iripo pachena mushure memashoko makuru.
Chii chitsva ne Snapchat?
Snap yakazivisa mitsva yekutsvagisa inouya ku Snap ku Snap Partner Summit 2020, inosanganisira yeAction bar, Nzvimbo dziri Snap Mepu, Misoro Yenyaya Yedu, uye Nhau Replies. Yakazivisawo zvinyowani zvitsva zveAR, senge SnapML zvisikwa zveLens Studio, yakagovana Local Lutions, uye kugona kuona zvirimwa nezvimwe zvakawanda nechinorehwa. Snap yakazivisawo nyowani Discover yezvinhu uye Snap Mavambo.
Iko kune chikamu chitsva cheKuitika Zvino mu Discover chinongedza nhau, mamiriro ekunze, uye horoscopes, zvakare. Zvimwe zviziviso zvinosanganisira slate yekurarama zvakanaka kuedza, senge Here For You hub yezvinhu mune profiles. Kune huwandu hwekuvandudza kwepuratifomu, zvakare, kubva kutsva HTML5 zviitiko mukutaura (inonzi Snap Minis) kune Bitmoji 3D avatars mumitambo yechitatu-bato. Tarisa uone iwo pazasi pazasi.
Zvishandiso zvitsva zvekushandisa
Snap iri kuunza nzira nyowani yekufambisa Snapchat, pamwe nekutsva zvinhu zve Snap Mepu uye Nhau.
Basa Bar: Contextual rubatsiro
Snapchat ine chitsva cheAction Bar chinhu, icho chakataurwa naSnap chakagadzirirwa kupa "yepamusoro-nhanho yekufamba" kubva panguva yaunovhura iyo Snapchat mobile app. Izvo zvinofanirwa kuchinja mamiriro zvichienderana nezve zvauri kuita kana kutarisa, zvakare.
Nzvimbo: Snap Mepu yakakurumbira mavara
Snap Mepu, iyo mepu inoratidzira izvo shamwari dzako dzeSnapchat dziri kumusoro uye dzinoratidzira nyaya kubva kunharaunda yeSyapchat, iri kuwana shanduro inowedzera Nzvimbo. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuwana mavara anofarirwa kutenderera pasirese.
A Nzvimbo Mbiri inosanganisira Snaps kubva kunzvimbo, kero, maawa ekushanda, uye ongorora kubva kuTradAdvisor neChina. Iwe zvakare unozogona kuraira chikafu kuMahara - kuburikidza neVatambi, DoorDash, uye Uber Eats - kutanga munguva pfupi kuUS.
Misoro: Yedu Nhau inowana musoro
Yedu Nhau ndeye apo vashandisi veSapapchat vanogona kuendesa yavo snaps uye mavhidhiyo nezvezvinoitika zviri kuitika pedyo navo, uye vamwe vashandisi vanogona kuzviona pasi rese. Iwo akaiswa mumapoka nechikwata cheSnapchat kutora chiitiko chemuno. Snap akati anopfuura mamirioni matatu snaps pazuva anogoverwa Nhoroondo Yedu. Zvino, pane nzira nyowani yekushandisa Musoro wekunamatira kana kuendesa Snap yako kuCommunity Topic.
Semuenzaniso misoro inosanganisira Hacks Hacks kana Oddly Kugutsa. Iwe zvakare uchakwanisa kuongorora Musoro Mapeji kuti uongorore mamwe snaps.
Nhau Dzemhinduro: Pindura kune nyeredzi
Snap akati irikuburitsa nyaya Replies kuti 'zviite nyore kutaurirana neStar Snap iwe urikutevera ". Aya anogadzira uye anozivikanwa anogona kushandura Yako Nhau Replies kuita zvimiti uye kuwedzera kune avo nyaya kune zvinhu zvakaita semibvunzo-nemhinduro zvikamu.
Zviitiko zvitsva zveAAR
Snap yakazivisa Lances nyowani uye yakawedzerwa echokwadi zviitiko zve Snapchat vanogadzira, vanogadzira, uye vashandisi vemazuva ese.
Snap yakanyanya AR chigadzirwa ine Lenses inogadzirwa neiyo Snap's dhizaini timu uye yepasi rese musiki nharaunda. Vagadziri uye vanogadzira vanoshandisa Snap yemahara desktop app - Lens Studio - kuvaka uye kugovera izvi zviitiko zveAAR muSnapchat.
Lens Studio: Muchina wekudzidza zvisikwa
Snap iri kugadzirisa Lens Studio nezvitsva zvitsva, kusanganisira chimwe chinhu chinonzi SnapML, icho chinobvumira chero mushambadziri kushandisa avo vamene michina yekudzidza michina kupa simba maLions. Mune mamwe mazwi, Vagadziri vanogona kugadzira yavo yeLenses ne neural network yavakadzidzisa.
Snap akati iri kubatana naWannaby, Prisma, CV2020, nevamwe pane yekutanga "SnapML zvisikwa".
Zvivakwa zvemunharaunda: Zvakagovaniswa Ar nyika
Snap iri kuongorora Local Lances, chinhu chitsva, icho chakati chinoita "kuramba uchidaro, wakagovaniswa Ar nyika yakavakwa pamusoro chaipo penzvimbo". Nenguva isipi, vanoshandisa Snapchat vanozokwanisa kushandisa Local Lutions kupinda mune chaiyo nzvimbo pamwechete uye "kushongedza zvivakwa zviri pedyo nependi inoyevedza".
Scan: Ziva zvirimwa, zvekudya uye imbwa
Vanoshandisa Snapchat vanogona "kudzvanya uye kubatirira" pane kamera skrini kuvhura akakodzera maLions zvichibva pane izvo kamera inoona.
Kuti uvandudze chimiro ichi, Snap yakabatana nePlantSnap saka iyo Snapchat kamera inokwanisa kuona makumi mapfumbamwe muzana ezvibereko zvese nemiti. Iyo zvakare inobatirana neimbwa Scanner, ichibvumira kamera kuona kuti inosvika mazana mana mafudzi. Pekupedzisira, gare gare gore rino, nekuda kweYuka, Snapchat inowedzera Nutrition Scanner, inopa chiyero pahunhu hwezvinongedzo mune zvakawanda zvakarongedzwa chikafu.
Lens Voice Scan: Nyora Lense nezwi rako
Snap haina kupa ruzivo rwakawanda, asi vhidhiyo yema promo yekuvandudza kwayo patsva-inoratidzira vashandisi vanozogona kumisa "Lens Voice Scan" kuti ishandise mamwe maLenses. Mune mumwe muenzaniso, Snap yakaratidza mukadzi achibvunza Snapchat kuti atendeudzire bvudzi rake pink, uye zvakangoita izvo.
Tichagadzirisa iyi post kana todzidza zvakawanda.
New Discover zvemukati
Snap inotsanangura Tsvaga se "yakavharwa, yakadzivirirwa" chikuva. Asi chaizvo chikamu chikamu muSnapchat uko iwe unogona kutarisa pfupi-fomu yepakutanga kuratidzwa. Snap akati inopfuura hafu yeUS Gen Z huwandu hwevanhu vanoona Snap Originals. Vanopfuura mamirioni makumi matatu neshanu vanoshandisa Snapchat, semuenzaniso, vakatarisa Will Kubva Kumusha, nyowani Nyowani Yepakutanga uko Smith achagovera chiitiko chake chekugara-pamba.
Snap Mavambo: Vabatanidzwa uye zvimwe zvirimo
Snap iri kuzivisa hushamwari hutsva hwakagadzirirwa kuwandisa huwandu hweruzivo uye rwekuvaraidza zvemukati zviripo kuti utarise mu Snapchat's Discover chikamu. Disney, ESPN, NBCUniversal, ViacomCBS, iyo NBA, uye iyo NFL vese vakapinda mumakambani mazhinji emakore akawanda ne Snap izvo zvinozoguma nekuratidzira nyowani uye yepakutanga hurongwa (aka Snap Mavambo) ekuwanikwa.
Snap iri zvakare kubatana nevasiki vakaita saLaugh Out Loud founder / CEO Kevin Hart, munyori uye director Catherine Hardwicke, mutambi uye mugadziri Anthony Anderson, uye Bunim / Murray Productions. Zvimwe zvezvinyorwa zvavo zvitsva zveSnap zvakagadzirirwa kutanga gore rinotevera, uye zvinosanganisira "zvinyorwa zvisina kunyorwa, mishina inofambiswa nevanhu, nemadrama akanyorwa uye kunakidzwa".
Imwe yemitambo mitsva yakaiswa "kubatsira kudzikisira hutano hwepfungwa". Inodaidzwa kuti Coach Kev, inogadzirwa naLaugh Out Loud uye inoratidzira mutedi uye mugadziri Kevin Hart achigovana positivity nehungwaru, "kuna ani zvake anoda kurarama hupenyu hwakanakisisa hupenyu". Ichatanga kutanga gore rino.
Zvinoitika Zvino: Nhau, mamiriro ekunze, uye nyeredzi
Snap iri kuunza nhau yenhau mu Discover, inonzi Kuitika Izvozvi, saka vashandisi vanogona kushandisa zvakanyanya kuputsa nhau kuburikidza ne Snapchat app. Snap akati vanhu vanopfuura mamirioni mazana matanhatu vakatarisa nyaya dziri paSnapchat kusvika iye zvino muna 125, uye kuti Zvinoitika izvozvi zvinoshandura nyaya idzi - ingave zvematongerwo enyika, varaidzo, zvemitambo, nezvimwe - kuita chimiro chitsva chinogadziriswa nharembozha.
Snap yakabatana nevaparidzi vakati wandei kupa zvirimo zveChinangwa Chino, kusanganisira The Washington Post, Bloomberg, Reuters, NBC Nhau, ESPN, ZvinoIzvi, E! Nhau, uye BuzzFeed Nhau. Izvo zvakare zvichashandira kumusoro zvakaendeswa Snaps kubva kune vashandisi vepasi rese. Uyezve, iwe uchaona yakagadziriswa mamiriro ekunze kubva kuAcuWeather (yakazara neBitmoji) uye horoscopes kubva kuSanhala.
Snap iri kuzivisa maficha matsva akagadzirirwa kudzidzisa nekutsigira vashandisi vari kunetseka nehutano hwavo pachavo. Snap akaongorora vashandisi vayo uye akaona kuti, pavanosangana nekushushikana uye kusagadzikana, "shamwari dzavo ndivo vanhu vekutanga vavanotendeukira kwavari pavanoda kubatsirwa, kupfuura vashandi kana vabereki vavo". Nekudaro, iri kupa zvinodzivirira kugara zvakanaka zviwanikwa kwevashandisi uye shamwari.
Headspace: Kufungisisa uye kuisa pfungwa
Snap yakabatana neHeadspace, inotungamirwa kufungisisa uye mindfulness service. Sechikamu chechimwe chinhu chitsva - chinodaidzwa kuti Snap Minis, icho chinobvumira vanogadzira kuti vapewo zvavo mini mini mu Snapchat - pachave neNew Headspace Mini mumavhiki anouya iyo ichapa vanoshandisa Snapchat mukana wekufungisisa neHeadspace maitiro. Izvi zvese zvinoitika zvakananga munhaurwa.
Chida chekubika: Papo wana rubatsiro
Snapchat ine-in-app yekuburitsa chishandiso chinobvumira vashandisi Snapchat kunyevera Snap kana vachishushikana shamwari dzavo vari mungozi yekuzvikuvadza, uye zvinobva zvazozivisa shamwari iyoyo chero rubatsiro ruripo. Snap iri kugadzirisa ichi chiitiko kuitira kuti vashandisi veSnapchat vakwanise kushamwaridzana nemabasa ekukurumidzira, kana kuti vanogona kutumira meseji yeKutambudzika kana kutaura neNational Suicide Prevention Hotline.
Shamwari Ongorora-Pamusoro: Ongorora yako runyorwa shamwari
Snapchat iri kuvheneka chitsva chekuchengetedzwa chiziviso chinoita kuti vanoshandisa Snapchat vaongorore runyorwa rwavo rweshamwari vobva vasimudza kusavanzika kwavo.
Heino Kwa Iwe: Chitsva chehandi mune profiles yevashandisi
Snap ine chishandiso chitsva chehutano hwepfungwa, chinodaidzwa Pano Pauri, icho chikamu cheSnapchat chakavakwa-mukati chekutsvaga chimiro. Yakagadzirirwa kuratidza "zvekuchengetedza" kubva kune nyanzvi dzehutano hwepfungwa - kusanganisira nyanzvi dzepano - kana iwe uchitsvaga dzimwe nyaya, dzakadai sekushushikana, kushushikana, kushushikana, kusuwa, pfungwa dzekuzviuraya, uye kudheerera. Zvino, Snap iri kuwedzera nyowani Pano Pano Kwa Iwe Center mune Snapchat vashandisi mafaira.
Zvitsva zveplatform zvinogadziridza
Pakupedzisira, Snap yakazivisa yakauraya shasha dzekuvandudza pamwe nekudyidzana mhiri kwayo SnapKit, Snap Games, Bitmoji, uye mamwe mapuratifomu. SnapKit inosanganisira zvishandiso izvo zvinoita kuti vanogadzira vabatanidze zvimwe zvakanaka zve Snapchat mune avo maapp. Zvichakadaro, Snap Mitambo ndiyo Snap's yemitambo ecosystem yemini-mitambo iwe yaunogona kutanga kubva mukukurukurirana. Ipapo pane iyo Snap Minis yatakambokurukura.
Aya angori mashoma emapulatifomu aSnap nemamiriro epasi. Heano kutarisa kune chitsva pane ivo vese.
Snap Minis: HTML5 zviitiko mukutaura
Snap Minis zviri HTML5 zviitiko zvakagadzirirwa kushandiswa mukukurukurirana muSnapchat. Heano mashoma e Minis akaziviswa kusvika ikozvino:
Coachella: Batanidza uye ronga yako festival lineup neshamwari dzako.
Headspace: Fungisisa uye utumire meseji inokurudzira neshamwari dzinoshaiwa.
Ngatizviitei: Unofanirwa kuita sarudzo yeboka? Iyi Mini inobatsira kusarudza yako inotevera kufamba.
Matikiti emuvhi: Sarudza nguva yekuratidzira kuimba yemitambo uye sarudza zvigaro pamwe chete.
Kufanotaura Tenzi: Nguva yakakodzera mibvunzo pane zvese - ona kuti ishamwari dzipi dzinopenga.
Saturn: Goverana uye enzanisa iwo emakirasi emadhivaki nevamwe vaanodzidza navo.
Tembo: Gadzira madhisiki emakadhi neshamwari paSnapchat, kubatsira kudzidza.
Kamera Kit: Leveraging Snapchat's kamera
Snap iri kuunzisa Kamera Kit kune vavandudzi kuitira kuti vagokwanisa kuunza Snapchat's AR uye kamera kamera kune avo emaapp. Snap akataura kuti, kuburikidza neKamera Kit, maLutions akavakwa achishandisa Lens Studio iye zvino anogona kugara paapp yavo uye Snapchat. Heano vabati vari kuronga kushandisa Kamera Kit:
MLB Ballpark app: Iwe uchave unokwanisa kupindirana nezvikwata uye mascots muAr.
Nike: Snapchat Menduru mune itsva mutsime app ichaita kuti vhidhiyo mhinduro uye zvakafanira.
Squad: squad vashandisi vachakwanisa kuwedzera kunakidza maLions ivo vachiona mavhidhiyo pamwe.
Triller: Nharaunda Triller ichakwanisa kushamwaridzana neLutions yakafuridzirwa nevatambi.
Dynamic Lances: Yakasikwa Kit inowana kuwedzera
Sechigadziridzo kune Snapchat's Creative Kit, Snap iri kuunza maDynamic Lances, ichigonesa vanogadzira kuti vaunze chaiyo-nguva yeruzivo kubva kune avo maapps muLenses. Vashandisi vanozokwanisawo kugovera lenses kune Snapchat kubva kune maapplication, kusanganisira Houseparty, Nike, uye Yahoo! Kufungidzira Mitambo.
Bitmoji: 3D maAvatars mumitambo yechitatu-bato
Snap iri kubaya chirongwa chitsva chakadaidzwa Bitmoji yeMitambo. Inounza 3D Bitmoji avatars kumitambo yechitatu, saka vashandisi vanogona kutamba seBitmoji yavo mumazita akasiyana siyana pane chero chikuva, kusanganisira nhare, PC, uye console. Ramba uchifunga Snap yakatenga Bitmoji makore apfuura uye yakapa kwenguva yakareba vashandisi vayo kutumira zvimiti uye zvimwe zvakanaka zvemukati neyetsika yavo Bitmoji avatars.
Mishoma yeBitmoji yeMitambo-inotsigirwa misoro pakuvhura inosanganisira:
Yakakwana Master 3D (Gismart)
Scrabble Go (Scopely)
SingHeads (Kurota Kwechokwadi Kurudziro)
Super Brawl Universe (Nickelodeon uye Playsoft)
Mvura Shooty (Rollic uye Tiplay Studio)
Snap Mitambo: Zvimwe zvekutanga uye zvechitatu-bato mazita
Snap yakazivisa mutsva mutsva wemitambo kubva pachawo uye kubva kune vatsva nevavepo vehukama:
Bitmoji Paint (Snap): Huyai pamwe chete kuti mupe mupiro kune imwe, yakakura misa Collage.
Kubvisirwa Kunze (Zynga): Dzora mota uye kuedza kudzimisa shamwari pachitsuwa.
Shamwari Quizzes (Game Kuvhara): Goverana Quizzes uye uwane kuti ndiani anowana akanyanya miuyo.
Nordeus: Iva mutambi wenhabvu.
Quiz Party (Mojiworks): Wongorora ruzivo rwako muzvikwata neshamwari dzako.
Kugadzirira Gadzirira! (PikPok): A mini-gorofu mutambo uko vatambi vanoshandisa yavo Wits uye Reflexes.
Chipfuramabwe Racers (Madbox): Swing, tora kukiya, uye ita kusvetuka mune ino chaiyo-nguva mutambo wevatambi vakawanda.
Nguva yechando (Funday Factory): Ridza mitunhu ine Bitmoji yako.
Super Snappy Bowling (NOWWA): Chaiwo-nguva, mutambo wevatambi wakawanda.
Unoda kuziva zvakawanda here?
Buda Snapchat's blog mamwe mashoko.
Ese ma2020 Vhidhiyo Kuburitswa Mazuva
Maitiro Ekugadzira Uye Kunze A Bitmoji Avatar Mune Snapchat
Mashandisiro Ekushandisa Snapchat Kukurudzira Kubatikana: 7 Anotyisa Matipi
Mashandisiro Ekushandisa Snapchat Kukurudzira Yemagariro Midhi Engagement
Maitiro Ekuchengetedza Snapchat Mavhidhiyo
Maitiro ekuwedzera iyo 3D Bitmoji avatar kune yako Snapchat profile
Facebook Nhau, Instagram Nhau, uye Snapchat - Mafomati matsva eZera Idzva
Nzira 15 dzekushandisa Snapchat kune rako Bhizinesi
Snapchat Trophies Aenda Asi Iyi Snapchat Charm Chinyorwa Inobatsira
@2022 - websetnet.net. All Right Reserved. Yakagadzirwa uye Yakagadziridzwa na PenciDesign